Umlinganiso weHashe lendoda yamaHashe ixesha elide ukuhambelana - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Umlinganiso weHashe lendoda yamaHashe ixesha elide ukuhambelana
Umlinganiso weHashe lendoda yamaHashe ixesha elide ukuhambelana
Ngokwe-zodiac yaseTshayina, ubudlelwane phakathi kwendoda yehashe kunye neRat woman bunokuqina ekuqaleni, kodwa kuphela de babini baqonde ukuba bahluke njani.
Iikhrayitheriya Isidanga sokuhambelana komfazi waseHashe yeHashe
Unxibelelwano lweemvakalelo Ngaphantsi kwe-avareji ❤ ❤
Unxibelelwano Umyinge ❤ ❤ ❤
Ukuthembela nokuxhomekeka Ngaphantsi kwe-avareji ❤ ❤
Amaxabiso aqhelekileyo Ngaphantsi kwe-avareji ❤ ❤
Ukusondelelana kunye nokwabelana ngesondo Yomelele ❤ ❤ ❤ ❤
Xa isibini, indoda yeHashe kunye neRat woman inokuba namandla kakhulu kwaye inomdla ebhedini, kodwa hayi ixesha elide. Usenokonwabela iihambo azicebisayo kwaye amthande ngenxa yokuba engalindelekanga, kodwa hayi ngonaphakade.
loluphi uphawu feb 5
Ingangumbono olungileyo ukuba bazame ukuvula ishishini kunye kuba akazukuthandabuza ukuthatha umngcipheko, ngelixa yena eya kuba nguye oququzelela yonke into.
Ulawula kakhulu, indoda eyiHashe ifuna inenekazi layo lithobele kunye nayo. Nangona kunjalo, uyathanda ukonakalisa inkosikazi yakhe kwaye enze ngobudenge xa ​​ekunye naye. Umzekelo, angabacebisa ukuba bahambehambe ngoobhaka babo emhlabeni xa badala.
Ingqondo yakhe encinci inokugcina uthando lwabo luvutha. Eyona nto ayonwabeleyo kukhululeka kwaye akunyanzelekanga ukuba achaze abanye abantu ukuba kutheni esenza izinto ngendlela enza ngayo. Uhlala ephupha kwaye enethemba xa kufikwa kwikamva, uhlala kuphela ngoku kwaye akagxininisi kakhulu kulo msebenzi, ngoko ke angambonisa ukuba ubomi bulula xa uzinze kancinci kwaye ugxile.
Bobabini bazimisele ngothando, ngoko akuyi kubathatha ixesha elide ukuba baziphathe kakubi. Nangona kunjalo, uchulumanco lwesiqalo esitsha esiqalayo siqala ukuphela ngokukhawuleza nje ukuba ambone engaphezulu kwaye engakwazi ukuzibophelela, nto leyo azama ukuyiphepha xa ekhetha iqabane.
Indoda yeHashe inokukhula icaphuke kakhulu xa ibona inenekazi layo lifuna ukumshiya, kodwa oku akuthethi ukuba iya kugxila ekwenzeni izinto ngokuchanekileyo, njengoko ingakwazi ukufunda phakathi kwemigca, ibona ukuba inyanisekile. kwaye ulindele ukuba abanye bafane, nokuba ingxaki ibuthathaka kangakanani na.
Endaweni yoko, angabalekela kwiingalo zomnye umfazi, ngokuqinisekileyo ezinokuqinisekisa ukuba ibuzi leRat limshiye. Ukuba krelekrele kakhulu, indoda yeHashe inokufumana izisombululo kwiingxaki ngaphandle kokucinga kakhulu.
Ngelixa abanye besokola ukuqonda ukuba yintoni ebangela umba, nguye oza kujongana nawo ngephanyazo. Oku kuthanda kakhulu ibhinqa leRat kuba liya kusokola ukuqonda indlela elisebenza ngayo, ndingasathethi ke ukuba lithanda umngeni.
Ukuqonda isidingo somnye sokuzimela
Indoda yeHashe kunye nebhinqa leRat kubonakala ngathi banayo into abayifunayo ukuze ugcine ulwalamano lwabo luyonwabisa kwaye luyonwabisa. Basenokungaziboni izinto ebomini ngendlela efanayo, kodwa oku akukhathazi ukuba abanakwenza mzamo wokuba nezinto phakathi kwabo zisebenza.
Usenokungathandi ukuba akaphumli kwaye akazinzanga kwaphela, uya kuhlala ecaphuka xa ejonge ukuqala umlo kuba nje efuna ukonwaba ngendlela yakhe.
I-pisces man aries imitshato yomfazi
Wayengasokuze athethe ngeemvakalelo zakhe, ngekhe ayeke ukuxoxa ngezakhe. Ibhinqa leRat likulungele ukusebenza nzima kubudlelwane balo kwaye linothando oluninzi elinokulunika, ngakumbi ukuba linosapho kunye nendoda eliyithandayo.
Kwelinye icala, indoda eyiHashe kufuneka ibenomzimba kangangoko kwaye ikhuselwe inkululeko yayo. Usenokumbona ngathi uzicingela yedwa kwaye akakhathali, ucinga ukuba unezinto kwaye akanako ukuqiqa nazo, ngoko ke banokugqibela ngokungafumanani benomtsalane kulwalamano lwabo ukuze luhlale ixesha elide.
Kwimeko apho ibhinqa laseRat kunye nendoda yeHashe lisafuna ukwenza izinto zisebenze, ibhinqa laseRat kufuneka liqonde ukuba lifuna inkululeko yalo, hayi ukuba lizama ukumthintela, okanye alixabisanga ubudlelwane babo.
Kwangelo xesha, kufuneka aqonde ukuba isibini sibandakanya abantu ababini kwaye kufuneka enze ulungelelwaniso amaxesha ngamaxesha. Njengokuba kunjalo, bobabini kufuneka benze ulungelelwaniso kuba ingengabo abona bantu bafana ehlabathini. Azizichasi nazo, kodwa zinokwahluka okuninzi.
Umlinganiso weRat kunye nehashe ukuhambelana: Ubudlelwane beQuirky
Iminyaka yamaTshayina yehashe: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 no-2014
Iminyaka yamaTshayina Rat: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 no-2008
Indibaniselwano yaseChina yamaZodiac
Ihashe laseTshayina i-Zodiac: Iimpawu zoBuntu eziPhambili, uthando kunye nethemba lomsebenzi
Impuku Zodiac yaseTshayina: Iimpawu eziphambili, uthando kunye nethemba lomsebenzi
Umfazi waseLibra: Iimpawu eziphambili kuThando, uMsebenzi kunye noBomi
Nge-18 ka-Agasti iZodiac nguLeo-Ubuntu obuGcweleyo beHoroscope
yintoni ujanuwari 20 zodiac sign
Uphawu lwe-6/23 zodiac
indlela yokuphumelela umva indoda
umfazi we-scorpio umtshato womntu
Kutheni le nto ii-capricorn zikukhohlisa
Libra indoda kunye ne-sagittarius iingxaki zabasetyhini
indlela yokuncoma umfazi we-aries